Khilaafka u dhexeeya Madaxweyne Farmaajo iyo Ra’iisal wasaare Rooble oo weji cusub yeeshay | Gaaroodi News
September 8, 2021 | Published by: Tifaaftiraha
Rooble iyo Farmaajo oo dhoolla-caddeynaya inta uusan khilaafkooda soo shaac-bixin
Ra’iisal wasaaraha Soomaaliya, Maxamed Xuseen Rooble, ayaa Isniintii shaqo joojin ku sameeyay Fahad Yaasiin oo sanadihii dambe ahaa agaasimaha hay’adda sirdoonka Soomaaliya ee NISA. Fahad Yaasiin
Khilaaf u dhaxeeya Madaxweynaha iyo Raysalwasaaraha oo ku aaddan Hoggaanka Nabadsugidda, ma aha markii ugu horraysay ee Soomaaliya ay waajahayso xaaladdan oo kale. Hay’adda sirdoonka Soomaaliya
Hore dawladdii ka horraysay tan Farmaajo ee uu hoggaaminayey Xasan Sheekh sidaas oo kale ayaa khilaaf ka abuurmay markii Raysalwasaarihii xilligaas Cabdiweli Sheekh Amed, uu xilka ka qaaday taliyihii xilligaas ee Hay’adda Nabadsudgidda Cabdillaahi Maxamed Cali Sanbalooshe.
Go’aankaas oo madaxweynuhu diidey, dood maalmo socotay kaddib madaxweynuhu wuxuu oggolaaday go’aankii raysalwasaaraha, sidaana uu taliye cusub ku noqday Jeneraal Cabdiraxmaan Maxamed Tuuryare.
Hadda Ra’isulwasaare Maxamed Xuseen Rooble waxa uu faray taliyaha sida kumeelgaarka uu isniintii u magacaabay oo ah Sareeye Guud Bashiir Goobe in uu xilka la wareego.
Waxa ay u muuqataa in warbaahinta dowladda ay gebi ahaanba joojisay faafinta war saxaafadeedyada kasoo baxa xafiiska madaxweynaha, tan ayaa ka dambeysay markii boggaga rasmiga ah ee Taleefishinka Qaranka laga tiray warkii xalay kasoo baxay Villa Soomaaliya ee lagu magacaabay taliyaha cusub ee nabad suggida.
Taas badelkeed, saacado kadib ayaa lasoo daabacay war saxaafadeedkii kasoo baxay xafiiska Ra’isulwasaaraha.
Warbaahinta gudaha qaar ayaa tabinaysa in boggaga warbaahinta dowladda laga saaray saraakiishii Villa Soomaaliya ee warfaafinta ee galaangalka u lahaa in ay wax soo galin karaan, balse ma jirto cid madax banaan ama labada dhinac ka tirsan oo arrintan qirtay.
Magacaabista Kale ee Madaxweynaha
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa warqadiisii xalay sidoo kale ku magacaabay agaasimaha guud ee madaxtooyada, xilkaas oo loo magacaabay Cabdi Siciid oo horey u ahaa la taliyaha Amniga Qaranka.
Xilka la taliyaha Amniga Qaranka ayuu madaxweynaha u magacaabay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir.
Agaasimihii kumeelgaarka ee madaxtooyada Cabdinuur Maxamed Axmed oo qoraal soo dhigay boggiisa rasmiga ah xalay saqdii dhexe ayaa sheegay in uu soo dhoweynayo agaasimaha cusub, isaga oo madaxweynaha uga mahadceliyay ‘muddadii sanadka ahayd’ ee uu sida kumeelgaarka ah xilka u hayay.
Agaasimihii hore ee Villa Soomaaliya Dr Nuur Fuursade ayaa la sheegay in uu shaqada ka tagay dabayaaqadii sanadkii hore, hase yeeshee ma jirin meel rasmi ah oo lagu shaaciyay xil ka tagistiisa.
Shirka Amniga Qaranka
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhanka kale ku baaqay in la isugu yimaado shirka amniga Qaranka 18-ka bishan septembar, 2021-da.
Hase yeeshee Ra’isulwasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaanan soo hadal qaadin shirka uu madaxweynaha ku baaqay, wuxuuse war saxaafadeedka ku sheegay hadal u muuqday in uu kaas jawaab u yahay “Ra’iisulwasaaruhu isaga oo ku hadlaya magaca Golaha wadatashiga Qaranka wuxuu shacabka Soomaaliyeed iyo Beesha Caalamka u xaqiijinayaa in la dardargalin doono arrimaha Doorashooyinka dalka”.
Warqad uu soo saaray hoggaankii hore ee NISA Fahad Yaasiin oo uu ugu jawaabayay Ra’isulwasaare Maxamed ayuu ku sheegay in xogta ku saabsan kiiska gabadhii hay’adiisa ka tirsanayd ee la dilay Ikraan Tahliin in uu la wadaagi doono Golaha Amniga Qaranka, iyada oo sidoo kale war saxaafadeed kasoo baxay xafiiska madaxweynaha lagu ayiday arrinkaas.
Waxaa jiray kala aragti duwanaansho ku saabsan Golaha Amniga Qaranka, iyada oo dhinacyada siyaasadda Soomaaliya oo ay dowlad goboleedyada kamidka yihiin ay siyaabo kala duwan u turjumayeen xubnaha uu ka koobanyahay golahan